साइकल चलाउँद गर्दा जो मांसपेशिहरु झूल छन्: उत्तर सतह मा झूठ
धेरै रूपमा आरामपूर्वक विशेष ट्रयाक मा चढेर बाइक मा हिड्ने छन्। अर्कोतर्फ, प्रतियोगिता समयमा ट्राफिक जाम बिना शहर वरिपरि यात्रा कार विकास ती तुलना हो कि गति पुग्न। हो, र तपाईं मात्र होइन बाटोमा तर पनि पहाडी सहित कुनै न कुनै भू-भाग, मा सार्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, एक साइकल चढेर गर्दा मांसपेशीमा रक के को प्रश्नको जवाफ, वस्तुतः समान हुनेछ। मात्र फरक परिणाम लोड तीव्रता छ। र, को पाठ्यक्रम, यी चल्छ को प्रभाव (प्रशिक्षण) पनि फरक हुनेछ।
जब जो मांसपेशिहरु झूल छन् साइकल चलाउँद: शरीर जे
पनि अलिकति फिटनेस रुचि छ जो सबैसँग, ज्ञात लाभ एरोबिक व्यायाम को। यी छिटो गति, एरोविक्स मा र पाठ्यक्रम साइकलको को हिड्ने चलिरहेको समावेश गर्नुहोस्। मध्यम मात्रा मा यो खेल गर्ने संयुक्त समस्या ती मा contraindicated छैन भनेर उत्तरार्द्ध को लाभ, झटके को अभाव छ।
साइकल देखि प्रयोग स्पष्ट छ: यो उच्च गति मा ड्राइभिङ आउँदा, पर्याप्त हृदय र फोक्सोमा लागि ठूलो कसरत छ, र गम्भीर।
तर अझै पनि नकारात्मक विचार को टाउको गायब, रगत आध्यात्मिक सेना को मूड र ज्वारभाटा सुधार गर्न मद्दत गर्छ जो अक्सिजन, संग संतृप्त छ।
हामी के मांसपेशीमा साइकल झूल कुरा भने, यो कि खुट्टा को सबै मांसपेशीमा काम भन्न सुरक्षित छ। यो अद्वितीय र pedaling मा: प्रत्येक स्थितिमा त्यो छ, तल्लो limbs लोड चक्र हो, आफ्नै दल संलग्न। साइकलको कक्षाहरू खुट्टा को आकार सच्याउन प्रत्याभूति छन्।
धेरै कि काठी मा बसेर फिर्ता मांसपेशिहरु लगभग प्रयोग विश्वास गर्छन्। यो दृश्य गलत छ। उदाहरणका लागि, मास्टर धेरै सुरुमा एक बाइक चढेर झुकन छैन धेरै गाह्रो छ। यो आंशिक सीट स्थिति मा निर्भर गर्दछ: यो पाङ्ग्रा संग लगभग एउटै स्तर सेट गरिएको छ, र त्यसपछि आफ्नो पछाडि लोड उच्च गतिको दौड लागि पर्याप्त गम्भीर छ। निस्सन्देह, यो त सफल भएन फुल्नु, तर मांसपेशी-स्थिरिकारी महिमा मा काम गरेको छ।
हामी पनि प्रेस बारेमा भने गर्नुपर्छ। हो, उहाँले सन्तुलन कायम गर्न मुछिएको छ, तर फेरि। अधिकतम गतिशील भार पेट मांसपेशीमा cornering र कहिले उकालो ड्राइभिङ समयमा अनुभव। र यो जो यी अंक जोड्न सबैभन्दा अप्रत्यक्ष मांसपेशीमा, को खुट्टा पेडल मदत गर्न पाउँछ।
जो मांसपेशिहरु रक गर्दा एक साइकल चढेर: लोड स्तर
कत्ति धेरै मांसपेशिहरु काम गर्न हुनेछ चढेर बनाएका जो संग गति र के क्षेत्रमा निर्भर गर्दछ।
यो लोड को वितरण नै, उदाहरणका लागि, pedaling समयमा, सीट बसिरहेका, को जांघ को सामने भन्दा बढी हुन्छ पनि छ। तर तपाईं मूल स्थिति परिवर्तन गर्नुभयो भने, यो एक सानो बिट गलत हेर्न हुनेछ। सवारी अप खडा गर्दा, चाक र जांघों फिर्ता डाउनलोड गर्न पर्याप्त बलियो हुन सक्छ।
यसरी, मांसपेशीमा रक एक साइकल चढेर गर्दा, तपाईं सबैभन्दा हृदय र खुट्टा को मांसपेशिहरु तालिम जवाफ दिन सक्नुहुन्छ बारेमा सोच, बाँकी समर्थन समारोह प्रदर्शन। यो खेल अझै पनि हुनत शक्ति काम स्वीकार्छन् तत्व एकदम वृद्धि गर्न, एरोबिक व्यायाम मानिन्छ किनभने मांसपेशिहरु अभ्यास दिन छैन। यस मामला मा, साइकलको अतिरिक्त वजन कम गर्न र जो धेरै को लागि एक समस्याग्रस्त ठाउँ छ खुट्टा आकार, सुधार गर्न मद्दत गर्छ।
Handicaps - यो के हो? युरोपेली र एसियाली बाधा को नियम के हुन्?
मास्को गरेको पार्क, जहाँ तपाईं रोलर्स मा चल्न सक्छ। जहाँ हिउँदमा रोलर स्केट्स मा मास्को जाने
द्वारपाल - यो हुनुहुन्छ? सबै तपाईं आफ्नो भविष्य पेशा बारेमा जान्नु आवश्यक छ
Lusk: जनावरको आश्चर्य सक्छ